⁭မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခညောင်း သော ကိုတုတ်ကြီး: ဘောင်းဘောင်းချွတ်ပြီး ခေါင်းပေါင်းစွတ်ပြီလို့ ဆို............
ဘောင်းဘောင်းချွတ်ပြီး ခေါင်းပေါင်းစွတ်ပြီလို့ ဆို............
ကျွန်ုပ် ကိုကိုတုတ် တယောက် စာပေရေးသားခြင်း အမှုအား ရပ်နားထားခဲ့သည်မှာ ကာလကြာညောင်းခဲ့လေပြီ။
အဘယ်အကြောင်းဟူမူ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လဲ ပြက်ပြက်ထင်ထင် မသိ ။ သို့ သော်ငြား အတွေးတွေက ဦးနှောက်ထဲ ဘလောင်ဆူနေသည်မှာကား တူတူပုန်းတန်းကစားရင်း
ရာဝင်အိုးထဲဝင်ပုန်းလိုက်မိပြီးသကာလ အလုံးလိုက် အတွဲလိုက် အားပါးတရ အီးထုလိုက်မိသည့်နှယ် ကျယ်လောင် လွန်းလှ ... ပဲ့တင်ထပ်လွန်းလှ စိတ်၏ ဂန္ဒာရုံကိုပင် နှောက်ယှက်လွန်းစွ.............။
ကျွန်ုပ်၏ တကိုယ်ရေ စားဝတ်နေရေးအတွက် ကြုံရာ ကျပမ်းအလုပ်များဖြစ်သော ၊ တောက်တိုမယ်ရ လက်တိုလက်တောင်း အလုပ်များကိုလုပ်ရင်း ရရှိ ရှာဖွေလာခဲ့သော အသပြာလေး တမူးတပဲလောက်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် လက်ကိုင်ပုဝါကလေးဖြင့်
ထုတ်လျှက် အိတ်ကပ်ထဲ ထည့် ပြီး မေးစိလေးပွတ်ကာ ဘတ်စ်ကားခုံလွတ်ရာဆီ အသော့နှင်ရင်း စိတ်ထဲ တွင် ကိုဗဒင်၏ နေရာဆိုသော သီချင်းကလေးကို ငြီးနေမိ၏။
ယင်းသို့ ဖြင့် ဘယ်အချိန်ကာလ၀ယ်က ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်လာသည်မသိသော မိတ်ဆွေ ဗိန္ဒောဆရာက ကျွန်ုပ်၏ သန်မာထွားကျိုင်း တောင့်တင်း ၀ါဝင်းသော လက်မောင်းအိုးကြီး ၀ါးခြမ်းပြားလောက်ကို လှမ်းပုတ်ကာ
"ဟေ့လူ... အောင်မယ်လေးဗျာ ..ကျုပ်တယောက်လုံး ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်လာတာမမြင်ဘူးလား ဘာတွေ အတွေးတွေ လွန်နေသလဲဗျ"
ကျွန်ုပ် ၏ စိတ်ထဲ တွင်တော့ ဒင်းကဘာမို့ လို့ ကျုပ်တယောက်လုံး တက်လာတာမမြင်ဘူးလားလို့ ပြောရတာတုန်း" ဟုတွေးရင်း နွေရာသီမနက်ခင်း ဈေးတန်းမှ ငါးစိမ်းသည်၏ ဗန်းထဲတွင်ဖျတ်ဖျတ်လူးနေသော ငါးခူတကောင်လိုပြုံးကာ
"ဘာရယ်ဟုတ်လှပါဘူးလဗျာ... ဂလိုပါပဲ သီချင်းလေး စိတ်ထဲက ငြီးကောင်းလို့ ငြီးနေတာဗျ"ဟု ဆိုက်ကားဘယ်သောအခါမှ စီးမည်မဟုတ်သော မြင်းလှည်းဆရာကို ဖြေလိုက်သည့် လမ်းထိပ်က ဆိုက်ကားဆရာ ကိုပြူးမောင် ၏ ဂိုက်ဖြင့်
လက်ပိုက်ဖြေလိုက်ကာ ထိုင်ခုံနောက်မှီကို အသာလေးမှီပြီး မျက်စိ ကို စုံမှိတ်လိုက်၏။ ထင်လာသော ပုံရိပ်များကို ရုပ်ရှင်ပိတ်ကား တစ်ခုပေါ်မှ ဇာတ်ကောင်များကို ငေးသကဲ့သို့စိတ်အာရုံဖြင့် ငေးရင်း မျက်စိမှိတ်လျှက်
ငုံထားသော ကွမ်းကို ဖြေးဖြေးလေး ၀ါးနေလိုက်မိတော့၏။ တိုက်ပွဲ သဘောအရဗျူဟာမြောက် ပြောရမည်ဟူမူ ငုံမိမှတော့ ၀ါး မှဖြစ်ပေတော့မပေါ့.. ဟုတ်ပေဘူးလော...။
ဇရက်မင်းစည်းစိမ်ဖြင့် ငြိမ်ငြိမ်လေးနှပ်နေသော ကျွန်ုပ်၏ လိပ်ပြာကို ဆတ်ဆတ်ခါသွားအောင် နားနေသော အကိုင်းအား သောက်ရမ်းကိုင်လှုပ်လိုက်သည်နှင့်တူသည့် ညောင်နာနာ အသံဖြင့် ဗိန္ဒောဆရာက
"ဟေ့လူ တတ်သိပညာရှင် ဦးခင်မောင်ဆွေ ရေးတာဖတ်လိုက်ရလားဗျ ဧရာဝတီ သတင်းဆိုက်မှာ" ဟု မေးလိုက်တော့၏။
"ဘာဗျ ဓါတ်မီးပညာရှင် ရူးချင်ယောင် နေ ကွေးတာ ဖြတ်လိုက်ရလားဟုတ်လား " ဟု ဆတ်ကနဲပြန်မေးလိုက်မိ၏။
" ဟာ ခင်ဗျား တော်တော် ခေတ်ကြီးနဲ့ ကင်းကွာနေပြီပဲဗျ ဧရာဝတီမှာလေဗျာ ဧရာဝတီမှာ" ဟု အလောတကြီး ပင် ငတိက ပြောရင်း လူကိုပင်ဖမ်းသန်းရှာတော့မည့်လက်ပေါက်ဖြင့် ပြောလာသည်မှာ
ကျွန်ုပ်၏ အိမ်ဘေး မှ ကွမ်းယာသည် ချိုချိုပေါ်မသိမ်း တို့ တသိုက်၏ အထာနှင့်ပင် ထူသေးတော့၏။
"ဟ ဧရာဝတီမှာတော့ ဒိုက်ပုံ ရယ် တုံကင်းပေါ်က ပါသွားတဲ့ အီးတုံးရယ် သဗ္ဗ္ဗာန်သမားငေါ့ပန်းထားတဲ့ သေးရယ် ပဲရှိမှာပေါ့ဗျ ကျုပ်က ဘာလို့ သွားရမတုန်း" ဟုပြန်မေးလိုက်၏။
အမှန်တော့ ကျွန်ုပ်လဲ ခေတ်ကြီးနှင့် ထိုမျှလောက်မကင်းကွာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် သုတေသနအဖွဲ့ဖြစ်သော လဥ အဖွဲ့ မှ စော်ပြူး တို့ နှင့်တကွ ရှိုစရာ၏ လင်တော်မောင် ကြောင် ကွိုင် ဘူး တို့ အပါအ၀င်၏ ဂွင်ရိုက်ဖင်နှိုက်သော လုပ်ရပ်များဖြစ်သည့် မြန်မာပြည်တွင်းမှ ကလေးများအား ခေါ်ထုတ် ကာ
သင်တန်းပေါင်းစုံပေးလျှက် ကလေးများအား မ၀ရေစာ
နေ့ စဉ်အသုံးစားရိတ်လေး ထုတ်ပေး၍ အခန်းထဲလှောင်ပိတ်ပြီး၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ကို မထိရေး ၊ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပါတ်သက်၍ Negative ဖြစ်မည့် မွေးခန်းများအား အိမ်သာဗျူးရာတွင် မဗျူးရေး တို့ ကအစ ကြက်တူရွေး စာအံသလို သင်ပေးနေသည်ကို
မသိ၍ မဟုတ် သိပေ၏။
ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်လှ၏ ဟု ကျွန်ုပ်မမှတ်မိသော ပညာရှိတဦးက ပြောခဲ့သည်ကို ကြားဖူး နားဝရှိထားပေသဖြင့် ဆိုရပါတော့ လအံ့။
ရွေးကောက်ပွဲ နှင့်ပါတ်သက်၍ ဦးသုဝေ တို့ပြည်တွင်းမှအပြင်ထွက်လာသည်။ မြန်မာ့ အတင်း သတ်မကွ မှ ဖိတ်ကြားကာ ထိပ်ထား မဟာ မမကဲ့သို့အပြတ်ဆင်ယင်ပေးလျှက် CNN မှ မစ္စတာ ရို့ စ်တို့ထက် ပိုမို စမတ်ကျလှသော ဆရာ စိန်ဝင်းဆိုသည့်
မတ်စိမ ဆိုသည့် သတင်း ဆိုက်မှ ကိုယ်တော် ချောကလဲ ရေလာမြောင်းပေးလက်ဝါးရိုက်မေးသွား၏။ ဦးသုဝေ ဘာဆိုတာကို ဦးသုဝေ ကောင်းကောင်းသိပါသည်။ ထို့ အတူ ဦးခင်မောင်ဆွေ ဘာဆိုသည်ကို ဦးခင်မောင်ဆွေ သိပါသလား ။
ဒီကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်လို့ ...."အသိဘူး အသိဘူး တားတား ဘား မှ အတိဘူး " ဆိုပြီး ကြက်တောင်စည်းစည်းကာ ခေါင်းခါခါလည်ခါ ခါဖြင့် ခါးတောင်းကျိုက် ၊ သနပ်ခါးပါးကွက်ကြား မျက်နှာနှင့် တော့ မဖြေလိုက်ပါနှင့် ။ ခင်ဗျားတို့ ဓါတ်မီးပညာရှင်တွေ အဖွဲ့ ကို
အထင်နည်းနည်းလေးကြီးခဲ့ဖူးသဖြင့် မိမိ၏ ညံ့ဖျင်းမှုကိုအပြစ်တင်နေသော ကျွန်ုပ်အတွက် မသက်သာလွန်းလှသဖြင့် ဖြစ်ပါတော့၏။ တကယ်တော့ ဦးခင်မောင်ဆွေ အောင်နိုင်ဦး တို့ နှင့် အခြားအခြား သော ဓါတ်မီးပညာရှင်များ လေလည်သူများ သိထားဖို
့လိုသည်မှာ Compromise လုပ်သည်ဆိုသည့် ကိစ္စသည် give in လုပ်ခြင်းမဟုတ် အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေး ၊ ခေတ်မှီပြီး ငြိမ်းချမ်းကြွယ်ဝ သာယာဝပြောထွန်းကားသော နိုင်ငံတော် တစ်ခုဖြစ်ရေး ၊ ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး ဆိုသည့် အနှစ်သာရများကို
တကယ်လိုလားပါလျှင် သက်ဆိုင်ရာ အင်အားစုများ တစ်ဖက်ပေါ်တစ်ဖက် အနိုင်မယူ အထက်ဆီးမှ ဓါးမမိုးပဲ အေးအေးသက်သာ တိုင်းပြည်အကျိုး လူထုအကျိုး တစ်ခုတည်း ဦးထိပ်ထားကာ ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည် သို့ မဟုတ်ပေလည်း ခေါင်းချင်းဆိုင်ကာ
ကျွန်ုပ်သည် မည်သည့်အခါကမျှ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ကို အားကိုးအထင်ကြီးခဲ့ဖူးသည့် ၀က်သားတုတ်ထိုးသည်မဟုတ်ပါ။ အမဲအူပြုတ်ရောင်းရင်း မိမိ၏ လှီးရမည့် ကြက်သွန်မြိတ်ကို စဉ့်နှီတုံးပေါ်တင်ကာအဘိဓမ္မာဖြင့် ကျကျ နန လှီးရင်း
နေစောင်းလျှင် အဖြူလေး တစ်စိတ်လောက်ဆွဲရန်သာ မူ ကျကျ တွေးတော နေတတ်သော ပေါ်လစီကိုအာမခံ သည့် ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
ခင်ဗျားတို့ လွှတ်တော်ထဲက လုပ်တာ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် မြင်လိုလှပါသည်။ အင်မတန် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့်ဖြင့် ငတိ တွေပါလား ဟုတော့ ကျွန်ုပ်က မှတ်ချက်မပေးပါ။ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးက ဘောင်းဘီချွတ်တွေကို မဲ မပေးဘူးဟု
သင်တို့ အပိုင်တွက် သည်ဆိုလျှင် ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေကို လေးရာ့တစ်အား လက်မှတ်ထိုးထွက်လာသော သူ လို ဟုတ်ပါဘူး နောက်အလုပ်ရဘူး ပြောတာ ပါ တား က ဒါနဲ့ပဲ လက်မှတ်ထိုး လိုက်တာ ဟု မိမိကိုယ်မိမိနှင့် ပြည်သူလူထုကို ဆက်၍
အတည်ပေါက်နှင့် ညာကြမည်ဆိုလျှင်တော့ ................................ဟွန့် ဘိုကျီး ဘောင်းဘီချွတ်..... လွှတ်တော်ထဲမှာ လုပ်မယ် လွှတ်တော်ထဲ မှာလုပ်မယ် ....ဟု ဆိုသည်ကိုသာ စိတ်အာရုံဖြင့် ကြားနေမိပါတော့သည်။
Posted by ☺ at 6:56 PM
လက်သံပြောင်ပါပေ့…. ရွာစားရယ်။ အားရသဗျာ။
အသံဖျက်ပီး နှာသံနဲ့ပြောပေမဲ့ ဒီအသံကြီး မှတ်မိပါတယ်။ ;)
နောက်ဆုံးပိတ်မှာ ဗဒင်သီချင်းကို နှာသံနဲ့ ဆိုတာကတော့ အော်ဂလီဆန်စရာကြီးဗျို့။ ဟိုရောဂါသည်တွေ သွားသတိရမိတယ်။
Civil war is in renewal process.
အာကျယ်ဖာဆွယ်နှင့် ရှောက်သီးတတင်း နောက်မီးလင်းသူမျာ...
ဘောင်းဘောင်းချွတ်ပြီး ခေါင်းပေါင်းစွတ်ပြီလို့ ဆို....